Inona no nitranga tao anatin’ny #FihaonanaGV tao Accra? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2019 18:28 GMT
Ireo mpandray anjara tamin'ny fihaonana GV tao Accra
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aprily 2015)
Mitombo haingana be ny fisandratana sy ny fidiran'ireo media sosialy tao Ghana. Vokatr'izay, nanomana fihaonana Global Voices voalohany indrindra ireo GVers tao Accra – #GVmeetup tao Accra tamin'ny 15 Novambra 2015. Fihaonana niarahana nanomana tamin'ny iSpace – foibe ara-teknolojika iray ao Ghana, fitàrana hetsika santatra iray nahomby izay mamolavola an'ireo startups mirona ara-teknolojika miaraka amina toerana iray fiarahamiasa, toerana iray famoriana vondrom-piarahamonina sy tambajotra iray natao hitondra ho amin'ny fahombiazan'iny fandraharahàna.
Vovonana tena sahaza io mba hampisehoana ny Global Voices amin'ny vondrom-piarahamonin'ireo mpanao gazety, blaogera ary manampahaizana manokana amin'ny serasera ao Accra. Ireto avy ireo asa natao nandritra ny hetsika:
Fanolorana fijery iray amin'ny asa izay iandraiketanay ato anatin'ny Global Voices, anisan'izany ny Rising Voices, Global Voices Advocacy sy ny Lingua;
Fizaràna ireo fomba izay hahafahan'ny vondrom-piarahamonina midadasika kokoa manomboka miaraka amin'ny Global Voices;
Fiasàna amin'ny tambajotra hahafahan'ireo mpandray anjara mifampizara torohay mikasika ny tetikasa nomerika na ny hevitr'izy ireo manokana mikasika ny tetikasa, ary
Ny fomba hamotopotorana ireo vaovao ao amin'ny media sosialy.
Nanolotra ny tenany tsirairay ireo mpandray anjara ary nampiseho an'ireo tetikasa isan-karazany izay niandraiketan'izy ireo, ary koa ny zavatra andrasan'izy ireo amin'ilay fihaonana. I Jeanne Clark (@JeanneC_IO ), Talen'ny Serasera ao amin'ny Ambasadin'i Etazonia ao Ghana, no anisan'ireo mpandray anjara nanatrika ilay fihaonana, hoy izy nibitsika hoe:
Great to be at @iSpaceGh again for #GVMeetup to learn more about @globalvoices
Faly fa tonga indray eto amin'ny @iSpaceGh ho an'ny #GVMeetup mba hahalala bebe kokoa mikasika ny @globalvoices
Ny lohahevitra nafàna tamin'ny adihevitra taorian'ny fampidirana mikasika izay ataon'ny Global Voices sy ny fomba hahazoana manjohy azy dia ny hoe “ahoana no hamotopotorana ireo vaovao ao amin'ny media sosialy?” Nizara fomba fijery samihafa ireo mpandray anjara, mikasika ny fomba hanamarinana ireo vaovao vokarin'ireo olontsotra mpanao gazety mampiasa ireo media vaovao:
Sentiment analysis is key in validating news on social media says a participant! #GVMeetUp #Ghana #Contributor pic.twitter.com/sDD7xBASuF — Cecil A.K Dadzie (@ghanabakwamena) November 15, 2014
Ilaina ny fandalinana ny fihetsehampo mba hamotopotorana ireo vaovao ao amin'ny media sosialy, hoy ny nambaran'ny mpandray anjara iray! #GVMeetUp #Ghana #Contributor pic.twitter.com/sDD7xBASuF — Cecil A.K Dadzie (@ghanabakwamena) November 15, 2014
Nibitsika ny traikefan'i Jeanne Clarks (@JeanneC_IO) i Cecil Dadzie (@ghanabakwamena):
.@JeanneC_IO shares an experience… There was false information on @USEmbassyGhana stopping VISA processing which was untrue! #GVMeetUp
Mizara traikefa iray i @JeanneC_IO … Nisy ireo vaovao diso momba ny @USEmbassyGhana nampiato ny dingana fanomezana VISA, izay DISO! #GVMeetUp
Nifarana niaraka tamina fotoana iray nametrahana tambajotra sy ireo fiarahamiasa teo amin'ny samy mpandray anjara ilay fihaonana.